Waxtarka toonta - 15 faaiido oo la xaqiijiyay - Caafimaad tips
Home / Khudaarta / Waxtarka toonta - 15 faaiido oo la xaqiijiyay
Waxtarka toonta - 15 faaiido oo la xaqiijiyay
Daily Active March 19, 2020 Khudaarta
Toonta waxay ka mid tahay cuntooyinka cilmi baadhayaashu isku waafaqeen waxtarkeeda caafimaad toontu waxay daawo ka tahay inta badan cudurada bini aadamka ku dhaca , sidoo kale toonta waxay ugu horaysa geedo daaweedyada umado badan ay taariikhda soo isticmaali jireen mudo aad u dheer.
Photo by Jackie from Pexels
Toonta iyo caafimaadka
Toonta waxay leedahay ur taas oo dadka qaar ay dhibsadaan laakiin sidoo kale urtaas markii cuntada lagu karsado waxay yeelataa udgoon iyo caraf soo jiidasho leh taas oo cuntada dhadhan wanaagsan iyo xiiso gaar ah u yeesha.
Toonta iyo timaha : toonta wuxuu alle ku abuuray maadooyin cajiiba kuwaas oo la dagaalama jeermiyada iyo bakteeriyada kuwaas oo sabab u ah daadashada timaha iyo ciladaha ku yimaada sidaas darteed toonta waxay ka qayb qaadanaysaa koritaanka timaha iyo caafimaadkooda.
Toonta iyo galmada : toonta waxaa ku jirta maadada loo yaqaano allicin taas oo ka qayb qaadata xoojinta dareenka raga iyo dareenka dumarka labadaba sidaa darteed inaad isticmaasho waxaa ku filan inaad cuntada uun ku darsato sida caadiga ah.
Toonta iyo malabka : oo la isku daro ama la isku khamiiriyo waa jeermis dile awoodiisu badan tahay waxayna roon tahay caafimaadka caloosha iyo dheefshiidka waxay kaloo hoos u dhigtaa dhiig kalastaroolka iyo dhiig karka.
Tonta iyo babaasiirta : toonta waxay ka mid tahay geedo daaweedka u roon jidhka meelihiisa buka sidaas daraadeed saliida toonta marka la mariyo meesha nabarka hadii la gaadhaayo waxay yaraysaa xanuunka.
Toonta iyo beerka : waxaa laga yaabaa inaad ka cabanayso beerka oo ku xanuuna ama beerka oo ku barara hadii ay sidaa tahay arintu kuuma wanaagsana toontu sababtoo ah khuburada caafimaadka waxay ku talinayaan in dadka qaba dhibaato dhinaca beerka aysan u fiicnayn inay cunaan toonta.
Toonta iyo hargabka : illaahay ayaa mahadleh waayo toonta waa mid kamida dhirta dabiiciga ah ee lagu daaweeyo hargabka waxay caawisaa qofka waxayna ka bogsiisa durayga ama hargabka.
Sidaas darteed waxaa laga yaabaa inaad in badan iswaydiisay oo tidhi hargabka maxaa u roon laakiin waxaan filaayaa inaad ogaatay maanta toonta inay tahay daawada hargabka.
Maadaama aynu ka hadalnay faaiidooyinka iyo waxtarka toonka waa muhiim inaan ka hadalno dhibaatada toonta ay yeelan karto waxaana ka mida .
Neefta afka oo ur yeelata iyo shiirka qofka oo isbedela
wadnaha oo ku hura iyo afka ilaa dhuunta oo ku hurta
waxaa kale oo qofku hadii uu iska badiyo ama ku xanuunsado isku arki karaa lalabo iyo matag iyo waliba gaas sidaa daraadeed toonta iyo gaaska hadii aad doonayso inaad qaadato waa inaad dhakhtarkaaga kala tashataa.